TikTok मा कति शुल्क लाग्छ? धेरै प्रभावकारहरु यो प्रकट | मोबाइल फोरम
ईडर फेरेनो | | इन्टरनेट
TikTok सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल वा अनुप्रयोगहरु मध्ये एक भएको छ संसारभरि युवाहरु बीच। यो सामाजिक सञ्जाल लाखौं प्रयोगकर्ताहरु को दुनिया भर मा सैकड़ों छ, यही कारणले यो ब्रान्डहरु को लागी एक राम्रो अवसर को रूप मा प्रस्तुत गरीएको छ र प्रभावकारीहरु, जसमा व्यापार को अवसर छ। यो केहि हो कि स्पष्ट छ यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि TikTok मा कती चार्ज गरीन्छ।
संसारभरि धेरै प्रयोगकर्ताहरु को शंका को एक TikTok मा कति चार्ज हुन्छ थाहा पाउन को लागी हो। सौभाग्य देखि, हामी यो प्रश्न को एक जवाफ छ, किनकि प्लेटफर्म मा धेरै प्रभावकारहरु आफैं पैसा को मात्रा उनीहरु लाई उनीहरुको उपस्थिति र यस मा कार्यहरु को परिणाम को रूप मा प्राप्त खुलाउन को लागी जिम्मेवार छन्। यो विषय मा धेरै अफवाहहरु पछि, यसको बारेमा शंका को बाहिर प्राप्त गर्न को लागी एक राम्रो तरीका हो।
एक काफी हालसालै सामाजिक सञ्जाल भएको बावजूद, TikTok को लोकप्रियता र प्रभाव छलांग र सीमाहरु बाट बढेको छ। यो के हो धेरै प्रभावकारिताहरु लाई यो मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी नेतृत्व गरीएको छ, विशेष गरी विशाल लोकप्रियता को बारे मा सजग छ कि यो आवेदन एक युवा दर्शकहरु बीच छ। यो पनी धेरै र अधिक ब्रान्डहरु को सामाजिक नेटवर्क मा उपस्थिति छ र यस मा विशिष्ट अभियानहरु को लागी लाई कारण बनाएको छ।
धेरै प्रभावकारहरुले खुलासा गरेका छन् कि टिकटक मा कती चार्ज छ। यो केहि पटक हो जसमा तपाइँ डेटा को यस प्रकार को उपयोग गर्न को लागी हो, जुन सामान्यतया सार्वजनिक छैन। पैसा को एक धेरै यस सामाजिक सञ्जाल मा उत्पन्न हुन्छ कि पहिले नै केहि थाहा छ, विशेष गरी यदि गत वर्ष त्यहाँ पहिले नै एक प्रभावशाली जो प्लेटफर्म मा उनको खाता को लागी धन्यवाद5मिलियन डलर भन्दा धेरै प्राप्त गरीएको थियो। TikTok मा कती शुल्क लिईन्छ भनेर कुल influ जनाले खुलासा गरेका छन्।
1 MacFarlands (२.2,6 मिलियन अनुयायी)
2 दाना हसन (२.३ मिलियन अनुयायी)
3 प्रेस्टन एसईओ (१.1,6 मिलियन अनुयायी)
4 युवा Yuh (१.1,6 मिलियन अनुयायी)
5 हनीहाउस (१० लाख अनुयायी)
6 एलेक्सा कोलिन्स (700.000 अनुयायी)
7 क्यारोलिना Freixa (415.000 अनुयायी)
8 सिम्फनी क्लार्क (210.000 अनुयायी)
MacFarlands (२.2,6 मिलियन अनुयायी)
MacFarlands एक परिवार हो कि २०१ in मा प्लेटफर्म मा सामेल हुने निर्णय गरीयो, मात्र वर्ष जसमा यो बजार मा शक्ति प्राप्त गर्न शुरू भयो। यो परिवार सामाजिक नेटवर्क मा २.2,6 मिलियन भन्दा धेरै अनुयायीहरु जम्मा, जसलाई पनि महत्व दिइरहेको छ। वास्तवमा, गत वर्ष उनीहरु टिकटकका लागि राजदूत बनेका थिए, उनीहरुका आफ्नै प्रतिनिधि भर्ना गर्नुको अलावा, केहि जसले प्रगतिलाई स्पष्ट पार्छ कि उनीहरुको व्यवसाय र उपस्थिति प्लेटफर्ममा भएको छ।
यसको अनुयायीहरु को एक ठूलो संख्या को कारण, धेरै को शंका को एक TikTok मा कती चार्ज हुन्छ जब यो २ मिलियन भन्दा धेरै अनुयायीहरु छन्। ब्रान्डेड सामग्री को लागी यो परिवार को प्रारम्भिक दरहरु उनीहरु ४,००० र ,,4.000०० यूरो को बीचमा थिए। यसको अतिरिक्त, उनीहरु लाई ती ब्रान्डहरु को लागी एक संयुक्त वा क्रस पदोन्नति गर्न को लागी इन्स्टाग्राम मा गर्न को लागी 2.000 देखि 5.000 यूरो को एक अतिरिक्त शुल्क छ। यदि तपाइँको अनुयायीहरुको संख्या बढ्दै गयो भने यी दरहरु पक्कै बढ्ने छन्।
दाना हसन (२.३ मिलियन अनुयायी)
डाना हसन इन्स्टाग्राम मा पछिल्लो बर्ष को गर्मी मा टिकटक मा उफ्रनु भन्दा पहिले परिचित हुनुभयो। यो प्रभावशाली मंच मा ज्ञात भएको छ उनको नुस्खा भिडियो को लागी धन्यवाद, जुन सामाजिक सञ्जाल मा धेरै प्रयोगकर्ताहरु द्वारा सिफारिश गरिएको थियो। यो केहि छ कि स्पष्ट रूप मा मंच मा अनुयायीहरु को संख्या को छिटो बृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ, जो वर्तमान मा २.३ मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु लाई जम्मा गर्दछ।
Dana Hasson को रूप मा लोकप्रिय कोहि संग, धेरै आश्चर्य TikTok मा एक प्रायोजित पोस्ट को लागी कति शुल्क लगाइन्छ व्यञ्जनहरु को क्षेत्र मा। तपाइँको मामला मा, तपाइँको दरहरु प्लेटफर्म मा एक भिडियो को लागी २,५०० देखि ५,००० यूरो सम्म को दायरा हो, यद्यपि यी दरहरु हो कि तपाइँ २ लाख अनुयायीहरु लाई पार गर्नु अघि थियो, त्यसैले यो अजीब छैन यदि तपाइँ वर्तमान मा उच्च दर छ। यद्यपि उनी आफैंले टिप्पणी गरे कि टिकटक मा तपाइँ इन्स्टाग्राम भन्दा कम कमाउनुहुन्छ, वा कम से कम अहिले को लागी, किनकि धेरै ब्रान्डहरु यस सामाजिक नेटवर्क को मूल्य देख्न थालेका छन्।
प्रेस्टन एसईओ (१.1,6 मिलियन अनुयायी)
जसको लागी विषयहरु मा रुचि छ को लागी वित्त, उद्यमशीलता र व्यापार सल्लाह, प्रेस्टन एसईओ TikTok मा पालन गर्न को लागी खाता हो। यो सामग्री निर्माता छोटो समय मा एक विशाल दर मा बृद्धि गर्न सफल भएको छ उनी सामाजिक नेटवर्क मा भएको छ, जब देखि उनले यस बर्ष को शुरुआत मा आफ्नो खाता खोले र १.1,6 मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरु छन्। यस मामला मा, सामाजिक नेटवर्क मा उनको उपस्थिति उनको पेशा को समानांतर एक गतिविधि हो, के रूप मा उनी आफैं धेरै अवसरहरुमा पुष्टि गरीएको छ।
सबै लोकप्रिय खाताहरु जस्तै, यो पनि TikTok मा प्रायोजित पोस्ट को लागी दरहरु छन्। तपाइँको मामला मा, तपाइँ त्यो बताउनुहुन्छ प्रत्येक TikTok को लागी लगभग 500 यूरो चार्ज गर्दछ प्रायोजित कि तपाइँको खाता मा जान्छ, यद्यपि दर केहि हद सम्म परक्राम्य वा चर छन्। यसले यो पनि पुष्टि गर्दछ कि यो प्रस्तावहरु को विशाल बहुमत अस्वीकार गर्दछ यो प्राप्त गर्दछ, किनकि धेरै मामिलाहरुमा उनीहरु लाई यसको दर्शकहरु संग केहि गर्न को लागी छैन, तर यो कारणले पनि केहि थोरै तिर्छन्।
युवा Yuh (१.1,6 मिलियन अनुयायी)
युवा Yuh एक TikTok खाता छ जहाँ उनी छाला हेरचाह दिनचर्या र यस क्षेत्र संग सम्बन्धित उत्पादनहरु को समीक्षा संग भिडियो देखाउँछ। यो सृष्टिकर्ता मंच मा छिटो बढेको छ, जहाँ उहाँ १.1,6 मिलियन भन्दा धेरै अनुयायीहरु हुनुहुन्छ हाल। उनको लोकप्रियता साँच्चै २०२० को शुरुमा बन्द भयो र उनी तब देखि सामाजिक नेटवर्क मा राम्रो बृद्धि कायम राख्न सक्षम छन्। उनको भिडियोहरु राम्रो दृश्यहरु जम्मा।
तपाईंको अवस्थामा, 800 र 2.500 यूरो को बीच शुल्क प्रत्येक भिडियो को लागी प्लेटफर्म मा अपलोड। उनीहरु केहि हद सम्म पुराना डाटा हो, त्यसैले यसको मूल्यहरु केहि हद सम्म उच्च हुन सक्ने सम्भावना छ, विशेष गरी अब यसको अनुयायीहरु को संख्या पनि यस बर्ष भर मा बृद्धि भएको छ र यो यस क्षेत्र मा सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो।
हनीहाउस (१० लाख अनुयायी)
यो सामाजिक नेटवर्क मा उपस्थित धेरै घरहरु मध्ये एक हो। यो एक खाता हो जहाँ विभिन्न प्रभावकारीहरु समूहीकृत छन्, जो पहिले नै यसको दोस्रो सिजन मा र जहाँ छ प्लेटफर्म मा मात्र १ लाख भन्दा बढी अनुयायीहरु जम्मा गर्नुहोस्। यस मामला मा, संस्थापकहरु प्रायोजन प्राप्त गर्न को लागी काम गर्छन्, केहि छ कि उनीहरु सबै प्रकारका क्षेत्रहरु मा बिभिन्न कम्पनीहरु बाट प्राप्त हुनेछन्, फेसन बाट पेय पदार्थ, उदाहरण को लागी।
हनीहाउस काम गर्ने तरीका अन्य प्रभावकारी खाताहरु बाट केहि फरक छ। जहाँ उपयुक्त हो, उनीहरु विकल्प वा प्याकेज को एक सूची प्रदान, 4.000 बाट 200.000 यूरो सम्म मूल्यहरु संग। यी प्याकेजहरु मध्ये प्रत्येक सामग्री को विभिन्न प्रकार, बिभिन्न क्षेत्रहरु वा एक फरक अवधि छ (ती समय को एक लामो अवधि मा बाहिर गरिन्छ) को प्रस्ताव गर्दछ। यी प्रायोजन को विचार यो हो कि समूह को लागी घर को भाडा र ती सामग्री को उत्पादन संग सम्बन्धित सबै चीजहरु को अपलोड गर्न को लागी वित्त को लागी सक्षम हुनेछ।
एलेक्सा कोलिन्स (700.000 अनुयायी)
एलेक्सा कोलिन्स प्लेटफर्म मा सबैभन्दा पुरानो मध्ये एक हो, जहाँ यो वर्तमान मा 700.000 अनुयायीहरु लाई पार गर्दछ। यो खाता अपलोड गर्दछ कि धेरै आश्चर्य को कुरा छैन, इन्स्टाग्राम बाट पनि ज्ञात छ: कपडा ब्रान्ड, स्विमिंग सूट, मेकअप र कपाल, यात्रा ... एलेक्सा आफैं पुष्टि गर्दछ कि उसको खाता र यो सामग्री अपलोड गर्दछ कि सबै भन्दा माथि एक महिला दर्शकहरु को लागी लक्षित छ। ।
उनी केहि महिना को लागी एक सामग्री रचनाकार रहेकी छिन् मैले अपलोड गरेको प्रत्येक भिडियो को लागी 400 यूरो चार्ज गरें उनको TikTok खाता मा। यद्यपि हालैका महिनाहरुमा यो अधिक प्याकेजहरु को पेशकश गरी रहेको छ, जसमा सामान्यतया इन्स्टाग्राम को रूप मा विभिन्न सामाजिक नेटवर्कहरु मा धेरै प्रकाशनहरु सामेल छन्। यी प्याकेजहरु को मूल्य उच्च छ, यद्यपि पल मा यो थाहा छैन जब उनीहरु मध्ये प्रत्येक को लागी चार्ज गरिनेछ।
क्यारोलिना Freixa (415.000 अनुयायी)
अर्को नाम जुन TikTok मा छिटो बढ्दै छ क्यारोलिना Freixa हो। यो २०१ of को अन्त्यमा प्लेटफर्ममा शुरू भयो, रमाईलो को लागी भिडियो अपलोड गर्दै, तर यो पछिल्लो बर्ष को मार्च सम्म थिएन कि उनको लोकप्रियता साँच्चै बढ्न शुरू भयो। यो एक भिडियो थियो जहाँ उनले Pinterest बाट उनको मनपर्ने पोशाकहरु पुन: सिर्जना गरे कि वास्तव मा उनको प्रोफाईल लाई प्लेटफर्म मा ज्ञात हुन मद्दत गरीयो। यसले उनलाई त्यस्ता धेरै भिडियोहरु अपलोड गर्न को लागी प्रेरित गरेको छ, जुन उनको खाता मा मुख्य सामग्री हो।
यो वसन्तमा उनले पहिलो पटक ब्रान्डहरु संग साझेदारी गर्न थाले। यस अर्थमा, जान्न को लागी TikTok मा तपाइँको खाता मा कती चार्ज गरीन्छ तपाइँ खाता को सामग्री को प्रकार मा लिनु पर्छ। संगीत एकीकरण को लागी यो 150 यूरो को एक शुल्क छ र उत्पादन वा ब्रान्ड एकीकरण को मामला मा, तिनीहरूको मूल्यहरु 300 र 500 यूरो को बीचमा छन्। यो प्रभावशाली को लागी, सामाजिक सञ्जाल केहि अंशकालिक हो र उनी यो आम्दानी को उनको मुख्य स्रोत हुन चाहँदैनन्।
सिम्फनी क्लार्क (210.000 अनुयायी)
उनको खाता प्लेटफर्म मा TheThriftGuru को रूप मा परिचित छ।। मार्च २०२० मा, उनी एउटा भिडियो अपलोड गरेर परिचित भएकी थिइन् जहाँ उनी हुडीलाई २ टुक्राको सेटमा परिणत गर्छिन्। एक भिडियो हो कि एक ठूलो सफलता थियो र कि दृश्यहरु को लाखौं जम्मा। यसले उसको उपस्थितिलाई बढ्न मद्दत गर्‍यो र वास्तवमा यो वर्ष उसले आफ्नो काम र प्लेटफर्ममा उसको दोस्रो हात पसलमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागी आफ्नो जागिर छोडिरहेको थियो।
तपाईंको अवस्थामा, 250 र 500 यूरो को बीच ब्रान्डहरु को लागी शुल्क उनले TikTok मा अपलोड गरेको भिडियो को लागी। यसको अतिरिक्त, यो इन्स्टाग्राम को लागी दरहरु सेट गरी रहेको छ, जहाँ यो एक उपस्थिति छ, प्याकेज को रूप मा धेरै मामिलाहरुमा दुबै सामाजिक नेटवर्क मा उपस्थिति को संयोजन। उनको दोस्रो हात स्टोर उनको आय को बहुमत को लागी खाता को रूप मा, साथै प्लेटफर्म मा उनको भिडियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » TikTok मा कति शुल्क लाग्छ? धेरै प्रभावकारीहरूले यसलाई प्रकट गर्छन्